पत्रपत्रिकामा स्वास्थ्य | Nepali Health - Part 6
अमेरिकी र बेलायती सबैभन्दा अल्छी !
September 5, 2018 Nepali Health Comment
एजेन्सी । विश्वमा शारीरिक परिश्रम नगर्ने मानिसको संंख्या १ अर्ब ४ करोड रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
मनमोहन सेन्टरमा गरियो ३७ हप्ताको गर्भवतीको मुटुको जटिल शल्यक्रिया
August 25, 2018 August 25, 2018 Nepali Health Comment
काठमाडौँ ९ भदौ । महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा ३७ हप्ताको गर्भवतीको अत्यन्तै दुर्लभ र जटिल मानिने मुटुको शल्यक्रिया सफल भएको छ । बिहीबार बिहान १० बजेबाट सुरु गरिएको उक्त शल्यक्रिया बेलुका ५ बजे मात्र सकिएको थियो ।
दुर्घटनाका घाइते अस्पतालमा बन्दी
August 23, 2018 August 23, 2018 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, ७ भदौ । चितवन राप्ती नगरपालिका भण्डाराका रमेश हुमागाईं ११ जेठमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे । भण्डारामै ट्रकले ठक्कर दिएर गम्भीर घाइते उनलाई उपचारका लागि काठमाडौंको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताल ल्याइयो । उपचारका क्रममा
August 22, 2018 August 22, 2018 Nepali Health Comment
उपचार नै नगरी ग्राण्डीले १ लाख ८० हजार शुल्क लिएको आरोप
August 14, 2018 August 14, 2018 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, २९ साउन । दाङ घोराहीकी रुद्रा पुन साउन १३ गते तरकारी केलाउँदै गर्दा हृदयघातका कारण बेहोस भएपछि परिवारका सदस्यले काठमाडौँको धापासीस्थित ग्राण्डी अस्पतालमा फोन गरे ।
August 13, 2018 Nepali Health Comment
एउटा मेडिकल कलेजको सम्पत्ति डेढ अर्ब, किन्ला त सरकारले ?
July 26, 2018 July 26, 2018 Nepali Health 1
काठमाडौँ, १० साउन । निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्दा कति लगानी लाग्छ भन्नेमा विभिन्न अनुमान छन् । तर, एमबिबिएस र बिडिएस कक्षाको शुल्क पुनरावलोकन गर्न २६ असार ०७३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले दुई वर्षअघि नै मेडिकल कलेजको सम्पत्ति मूल्यांकन गरिसकेको छ ।
July 16, 2018 Nepali Health Comment
July 13, 2018 Nepali Health Comment
काठमाडौं २९ असार । बिरामीले प्रयोग गर्ने अक्सिजन ग्यास उत्पादन तथा विक्रीवितरणमा सिन्डिकेट खडा गर्दै व्यापारीले प्रतिसिलिन्डर १ सय २५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएका छन् ।
मेडिकल कलेज खोल्न रोकिन्न : प्रधानमन्त्री ओली
July 8, 2018 July 8, 2018 Nepali Health Comment
काठमाडोँ, २४ असार । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखी आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई आन्दोलन छाडेर सरकारी कर्मचारीको